Wireless uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi Extender
Wireless Extender IR Remote
Shenzhen PAKITE Technology Co., Ltd yasekwa ngo-2008, nto leyo umboleki iimveliso zombane Developer & yoMvelisi with "Marketing, uPhuhliso, Velisani, Ukuthengwa, ngeles, Service". PAKITE iye babenikelwe 2.4GHz / 5.8GHz Digital STB Wireless Sharing Icebo, 2.4GHz / 5.8GHz AV Wireless Umthumeli, Wireless IR Extender Remote, Wireless lwetshiphu Video Umthumeli, Smart Control Icebo ..., PAKITE kuye kwanikelwa ingqalelo ekuphuhliseni qela kunye ezintsha imveliso kakuhle nobuchwepheshe engundoqo kunye nolawulo lomgangatho neemveliso iminyaka eliqela 'ikukuphuhlisa abekwe. "PAKITE" kuthathwa brand idumileyo Multimedia iimveliso umthengi indawo, apho iimveliso ziye ngokuthengisa zonke ilizwi kunye nomthamo yokuthengisa enye ngaphezulu.
Khula kunye nabathengi bethu kunye nokudala imeko win-win!
Ukuthatha ukuhlola, ukudala ixabiso lwehlabathi!
Customer kuqala, ukunyaniseka, nokunganyanzelisi nto, ethe!
Vumela Pakite abe iklasi lehlabathi eliphezulu-zobugcisa lweshishini mihla!
Lo mzi-mveliso ngumdali wobomi imveliso. Siyazi umongo kunye nokubaluleka isemgangathweni ubomi lweshishini bakhe. Ngoko ke, ekubeni ngokusekwa PAKITE, sibe unamathele "enyanisekileyo, kunene, umgangatho kuqala" ifilosofi ishishini. Inkonzo Injongo "ekhonza ngentliziyo yakho, ukwenza wanelisekile phambi". Kunye namathuba ezintsha ezifundiswayo abaxumi bethu, siye ubungqina kule minyaka ukuba siye sakhonza kwaye udale imveliso entsha, mqambi entsha.
Ukwenzela ukuhlangabezana nemfuno ekhulayo emarikeni, gqolo PAKITE kuphucula izakhono zobugcisa kwaye lwandisa neziseko zayo kwimveliso. Zonke mveliso e China ukubambelela kwimigangatho umgangatho ofanayo kwi yokuvelisa, iinkqubo zovavanyo kunye nolawulo lomgangatho ingqalelo eqhubekayo yophuculo. Ukongeza, PAKITE ubonelela ngeenkonzo ezifana yesondlo ukunceda abathengi ukunciphisa iindleko zizonke, ukuze kwandiswe ukusebenza ingeniso, yaye ekugqibeleni ukuqinisekisa ukuba abathengi bafumane imbuyekezo kakhulu enengqondo.
Siye sakubona ubuncinane 3 iitshekhi umgangatho ngethuba lenkqubo yemveliso ukuqinisekisa ukuba imveliso ukhululekile naziphi na iingxaki.
iimveliso yethu isangene FCC, CE, RoHS kunye nezinye iziqinisekiso. Ukukhawulelana neemfuno izicelo ezininzi.
Amaziko imveliso sisebenzisa sonke imvelo, yaye inkoliso inamacandelo zethu inokuphinda irisayikilishwe.
Idilesi: 12 Floor, 6 Building, Nankeng, Wuhe Road, Longgang District, Shenzhen.